Madaxweynaha Puntland oo balanqaaday in uu gole wasiiro ah oo cusub ku soo dooran doono 21 beri gudahood - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo balanqaaday in uu gole wasiiro ah oo cusub ku soo dooran doono 21 beri gudahood
July 18, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo warbaahinta kula hadlayay madaxtooyada kadib markii baarlamaanku kala diray golihii wasiiradda. [Xigashada Sawirka: Xafiiska Warfaafinta Madaxtooyada]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland ayaa balanqaaday in uu soo xuli doono gole wasiiro ah oo cusub kadib markii baarlamaanku kala diray golihii wasiiradda.
Isaga oo wariyeyaasha kula hadlayay Garoowe maanta oo Talaado ah Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali ayaa sheegay in uu soo dooran doono gole wasiiro ah oo cusub 21 beri gudahood.
Marka uu hadalka jeedinayay, Madaxweynaha ayaa ciidamada ku amray in ay adkeeyaan ammaanka dalka.
Gelinkii hore ee Talaadada, ku dhawaad 47 xildhibaan oo katirsan golaha baarlamaanka ayaa u codeeyay in ay shaqada laga ceyriyo golaha wasiiradda iyaga oo ku eedeeyay in ay kasoo bixi waayeen shaqadii loo idmay.
July 21, 2017 Madaxweynaha Puntland oo isku diyaarinaya soo doorashada wasiiro cusub
July 18, 2017 Baarlamaanka Puntland oo kala diray golaha wasiiradda
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowlada federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay xayiraadii ka qaaday Qaadka Miirowga oo ka yimaada dalka Kenya, kadib muddo asbuuc ah oo uu xayirnaa. Wadahadal ay Muqdisho ku yeesheen madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyata [...]